Batocera: sistemụ arụmọrụ maka ịghagharị | Akụrụngwa n'efu
Batocera: sistemụ arụmọrụ maka ịghagharị
E nwere ọtụtụ ndị Fans nke retrogaming, ya bụ, ndị niile na-ochie ma ọ bụ kpochapụwo video egwuregwu utu aha na-adịghị apụ nke ịke. Maka nke a, ọtụtụ ndị mmepe na -emepụta ọrụ iji gboo mkpa nke ndị ọrụ a nwere mmasị. Ihe omuma nke oru ndia bu kpomkwem Nnenna Onwuka, sistemụ nrụọrụ nke m ga-ewetara gị n'isiokwu a.
N'isiokwu ndị ọzọ anyị ekwuolarị ihe banyere isiokwu a na-atọ ụtọ, dịka ọ dị n'ihe banyere ndị kasị mma emulators na-adị maka osisi Pi osisi iji mepụta igwe arcade gị dị ọnụ ala, ma ọ bụ ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ na akụrụngwa ị nwere ike iji dịka ndị na-achịkwaọụ) ma ọ bụ njikwa maka ụdị a igwe arcade ahụkarị nke arcades nke 80s na 90s. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'okwu a, m na-akpọ gị ka ị gaa n'ihu ịgụ nke a na isiokwu ndị ọzọ iji mụtakwuo ...
1 Gịnị bụ Batocera?
2 Nweta Batocera.linux
4 Tinye egwuregwu vidio na Batocera
Gịnị bụ Batocera?
Ọfọn, dịka m kwurula, ọ bụ sistemụ arụmọrụ. Ihe oru ngo Nnenna Onwuka emejuputa OS zuru oke site na iji Linux dika isi, dika otutu oru ndi ozo. Ya mere, ọ bụ ọrụ nnwere onwe na imeghe.
Ihe oru ngo a bu ọkachamara na retrogaming, na enwere ya n'efu maka PC ma ọ bụ bọọdụ Rasberi gị, yana bọọdụ SBC ndị ọzọ dịka Odroid, wdg. N'ihe banyere inwe PC, enwere ike iji LiveUSB mee ka ị ghara ịgbanwe nkewa ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ dị ugbu a. Nke ahụ bụ, na ị na-eji pendrive na Batocera amalite ya ma ọ dịghị ihe ọ bụla kwesịrị itinye.
Ọbụna I nwekwara ike wunye ya na kọmputa ochie na ibe 32-bit x86, tinyekwara na Intel NUC, na Apple Mac, ọbụnakwa na igbe gam akporo dị ka Amlogic.
para nweta Batocera, ị nwere ike ibudata ya n'efu site na ebe nrụọrụ weebụ ngo. Ọzọkwa, site ebe ahụ ị ga-enwe nnukwu obodo ga-enyere gị aka, yana akwụkwọ iji nyere gị aka ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iji ya maka SBC, dịka nke Pi PiNaanị ị ga-ebudata ngwugwu ejiri ya na onyonyo sistemụ arụmọrụ, kpughee ya, wee jiri onyonyo a kwuru iji chekwaa ya na kaadị SD nke ị ga-ebu ụzọ si na motherboard gị. Maka ozi ọzọ, ị nwere ike lee edemede NOOBS na Wụnye NOOBS ngalaba ma soro usoro ndị ahụ maka Batocera.
Nhọrọ ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta kaadi SD nke Batocera maka Pi gị, bụ iji ama ama Ọrụ Etcher nke anyị kwurula banyere ya na HwLibre. Nwere ike ịhụ ozi niile, yana usoro ị ga - eso isiokwu anyị na-ebipụta...
Kama, ọ bụrụ na ị chọrọ mepụta USB maka PC, mgbe ahụ ị ga-agbaso otu usoro ndị ị kwesịrị ị na-eso ike bootable pendrive na ọzọ sistemụ. Nwere ike ime ya na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ site na isoro usoro ndị a dị mfe:
Budata ngwugwu Batocera.
Wepu faịlụ ebudatara iji wepụ ihe oyiyi IMG site na OS.
Ugbu a wụnye ma gbaa ọsọ ọ bụla nke ngwa ndị ahọpụtara maka usoro ahụ. Nwere ike ịhọrọ otu n'ime ọtụtụ ndị dị, dị ka Aetbootin (Windows, Linux, macOS), Rufus (Windows, Linux), Yumi (Windows, Linux), Etcher (Windows, macOS, Linux), wdg.
Jiri ngwa a iji họrọ pendrive etinyere na PC ebe ịchọrọ ịwụnye usoro na ihe oyiyi Batocera iji wụnye.
Soro usoro ihe omume ọkachamara na ị mechara.
Ugbu a, i nwere ike Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa, fanye pendrive.
Banye BIOS / UEFI ka ị gbanwee mkpa buut ma tinye USB dị ka isi. Wepu ma chekwaa mgbanwe ndị a.
Ugbu a, ọ kwesịrị ịmalite na Batocera kama iji OS gị.
Can nwere ike iji ya mee ihe ọ bụla masịrị gị. Na ịlaghachi na sistemụ arụmọrụ gị ị ga - achọ ịmalitegharị ma wepu USB ka ọ wee bido na sistemụ gị ...
Ozugbo ọ malitere, site na Batocera menu (pịa oghere igodo) ị nwere ike tinye nhazi ahụ gbanwee asụsụ na Spanish ma ya mere ọ ga-abụ ihe niile kensinammuo.
Ọ bụrụ n’ịche maka ndakọrịta egwuregwu retro nke Batocera na-anabata, nke bụ eziokwu bụ na o nwere ọba akwụkwọ zuru ezu ka ị nwee ike igwu egwu ọtụtụ egwuregwu vidiyo n'elu ikpo okwu nke ahụ bụ akụkọ ifo n'oge ahụ n'akụkọ ihe mere eme. Ya mere, ị nwere ike igwu ọtụtụ aha.
Maka ama ndị ọzọ, ị nwere ike ịhụ nke a ndepụta nke ụfọdụ nyiwe akwado:
Nintendo 3DS, Game Boy, Gamecube, Game Boy Advance, Game Boy Agba, 64, DS, usoro ntụrụndụ, SNES, Wii
Amstrad CPC, GX4000
64 dị mma
Sega Dreamcast, Master Master, Megadrive, Naomi, Saturn, 32x, CD, SG1000
Neo-Geo, CD, Akpa, Agba Agba
Sony PlayStation 1, PS2, PSP
Maka ozi ọzọ - Batocera ndakọrịta
Tinye egwuregwu vidio na Batocera
Ọ bụrụ na ịchọrọ tinye egwuregwu vidiyo na BatoceraCan nwere ike ịgbaso usoro ndị a dị mfe iji tinye aha ịchọrọ igwu egwu, ma ọ bụrụ na ha dakọtara na nyiwe ndị a kpọtụrụ aha.
Nke mbu bu chọta ebe nrụọrụ weebụ site na ebe ibudata egwuregwu Kedu ihe ị chọrọ. Enwere otutu weebụsaịtị na-enye ROM ochie, ọbụna n'ime Ntanetị Intanet ị nwere ike ịchọta ụfọdụ ndị ochie. Ozugbo inwere ROM, usoro iji tinye ya na Batocera gị dịkwa mfe, mana ị nwere ike ịme ya n'ọtụtụ ụzọ.
Otu n'ime mfe Ọ bụ dị ka ndị a:
Anyị buuru Batocera na kọmputa anyị.
Pịa igodo Ohere ma gaa na menu Config menu
Ugbu a gaa na Ngwaọrụ Nchekwa.
Họrọ draịvụ ike nke kọmputa nnabata gị ebe ahụ, ọ bụrụ na ị na-eme ya na PC. Ma ọ bụghị ya, ị ga-eji nhọrọ ndị ọzọ gafere ROM site na netwọk ejiri diski, wdg.
Draịvụ ike bụ ebe ị gaara ebudata ROM nke egwuregwu vidiyo ịchọrọ.
Ugbu a kụrụ azụ, wee regharịa usoro.
Ekwesịrị inwe folda a na-akpọ "recalbox" na draịvụ ike gị ugbu a. Nke ahụ bụ ebe ị nwere ike ịchacha, detuo BIOS, ROM, wdg. Naanị ị ga -e copyomi faịlụ nke unzipped ROMs n'ime folda ahụ site na sistemụ arụmọrụ gị.
Ozugbo inwetara ha, bidogharịa sistemu ma bido ya na USB na Batocera. Ga-enwe ike igwu egwu egwuregwu ahụ ugbu a.
Dị ka ị hụworo, o yiri ka a ga-esi mee ya maka Recalbox, na ihe kpatara ya bu na Batocera dabere na ya ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Batocera: sistemụ arụmọrụ maka ịghagharị
RecalBox: usoro ikpocha egwuregwu retro
Nest thermostat: Ngwaọrụ ụlọ smart nke Google